Ilaah waxba kuma haysto
Khabiirka cilmu-nafsiga ah ee la yiraahdo Lawrence Kolberg wuxuu sameeyay baaritaan ballaaran oo lagu cabiro qaan-gaarnimada deegaanka caqliga suubban. Wuxuu ku soo gabagabeeyey akhlaaqda wanaagsan in laga fogaado ciqaabta ayaa ah nooca ugu hooseeya ee dhiirrigelinta waxa wanaagsan. Ma waxaan badalaynaa dhaqankeena si looga fogaado ciqaabta?
Tani ma tahay toobadkeenida Masiixiyiintu u egyihiin? Masiixiyaddu waa mid ka mid ah dariiqooyinka badan ee lagu raadsado horumar xagga akhlaaqda ah? Masiixiyiin badan waxay u muuqdaan inay aaminaan in quduusnimadu ay la mid tahay dembi la’aan. In kasta oo aysan taasi gebi ahaanba khaldanayn, haddana aragtidan waxay leedahay mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn. Quduusnimadu ma aha maqnaanshaha wax, waa dembi. Quduusnimada jiritaanka wax weyn, oo ah ka qaybgalka nolosha Ilaah. Si kale haddii loo dhigo, waa suurtagal in la maydho dembiyadayada oo dhan, xitaa haddii aan guuleysanno (oo kanu waa weyn yahay "haddii", maadaama uusan qofna weligiis sameynin Ciise mooyee), waxaan wali seegi doonnaa nolol Masiixi ah oo dhab ah.
Toobad keenta dhabta ahi maahan inaan ka leexanno shay, laakiin waxaynu u jeesanaynaa xagga Eebaha ina jecel oo kan naftiisa waligiis u huray, innaga oo dhammayn, farxad iyo jacayl ka leh nolosha saddexalka Aabaha, Wiilka iyo in la wadaago Ruuxa Quduuska ah. U soo jeesashada xagga Ilaah waxay la mid tahay sidii indhahayaga loo furi lahaa oo loo oggolaanin lahaa in iftiinka loo iftiimiyo si aan u aragno runta jacaylka Eebbe - runtii waligeed jirtay laakiin taas oo aannaan arkin madaama maskaxdeenna dartood.
Injiilka Yooxanaa wuxuu ku tilmaamaa Ciise inuu yahay nalka gudcurka ku dhex jira, iftiinka dunidu aysan garan karin. Laakiin markaan aaminnay Ciise, waxaynu bilaabeynaa inaan isaga u aragno inuu yahay wiilkii la jeclaaday ee Aabbaha, Bixiyahayaga iyo walaalkeen ka weyn, kaas oo isagana lagu nadiifiyey dembiga lana keenay xiriir sax ah oo lala yeesho Ilaah. Iyo markii aan si dhab ah u aragno Ciise cidda uu yahay, waxaan bilaabeynaa inaan isku aragno nafteena kan aan nahay - carruurta Ilaah jecel.
Ciise wuxuu yidhi wuxuu u yimid inuu ina siiyo jacayl iyo nolol faro badan. Injiilku ma ahan mid fudud ama barnaamij cusub oo dabeecad beddela. Waa warka wanaagsan ee ah inaan ku dhow nahay isla markaana jecel nahay qalbiga aabaha, iyo in Ciise Masiix caddeyn nool u yahay dadaalka aan dhamaadka lahayn ee uu inagu soo jiidayo farxadda jacaylka daa'imka ah ee uu la leeyahay Wiilkiisa Ciise Masiix iyo kan Saint Maskaxda waa qaybsataa. Ku alla kii aad tahay, Ilaah baa ku jira adiga, oo aan kaa gees kaa ahayn. Indhahaaga u fur jacaylkiisa.
Waxaa qoray Joseph Tkack